कोरोनाबाट स्वदेशमा पहिलो नेपालीको मृत्यु, शनिबार राति नै सदगद : नेपालमाला
कोरोनाबाट स्वदेशमा पहिलो नेपालीको मृत्यु, शनिबार राति नै सदगद
काभ्रे : कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालमा पहिलो पटक एक व्यक्तिको ज्यान गएको छ। सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे–९ राम्चेकी २९ वर्षीया सुत्केरी महिलाको मृत्यु कोरोनाका कारण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको हो।
ज्वरो आउनुका साथै श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि थप उपचारका लागि काभ्रेको धुलिखेल अस्पताल लैजाँदै गर्दा बिहीबार उनको मृत्यु भएको थियो। मन्त्रालयले नेपालमा कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएको यो पहिलो घटना भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले शनिबार बेलुका विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको पुष्टि गरेका हुन्।
शनिबार रातिसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढेर २ सय ८१ पुगेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाका अनुसार गर्भवती ती महिला वैशाख २३ गते त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भर्ना भइन्। त्यसको भोलि नर्मल डेलिभरी भयो। अस्पतालले वैशाख २५ गते डिस्चार्ज दियो। त्यसपछि उनी सिन्धुपाल्चोकस्थित घर गएकी थिइन्।
अस्पतालले डिस्चार्ज दिएको एक सातापछि कोरोनाका लक्षण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। मृतकका पति, सासू र नन्दको स्वाब संकलन गरिएको छ। परिवारका सबै सदस्यलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। संक्रमितका परिवारसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको खोजी गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको छ।
कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको पोस्टमार्टम विशेष सावधानीका साथ गर्नुपर्छ। तर, ती महिलाको पोस्टमार्टम हुन सकेन। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने संक्रमणको डरका कारण पोस्टमार्टम हुन नसकेको जनाइएको छ ।
ती सुत्केरी महिलालाई जेठ १ गते राति साढे ९ बजे धुलिखेल अस्पतालको मूल गेटमा ल्याइपुर्‍याइयो। त्यति बेला उनको श्वासप्रश्वास बन्द भइसकेकाले आकस्मिक कक्षमा सीपीआर र इन्क्युवेटलगायत प्रक्रिया अपनाइएको अस्पतालले जनाएको छ।
परिवारका सदस्यले बताएका लक्षण कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो भएपछि मृतकको तत्कालै द्रुत परीक्षण (आरडीटी) गरिँदा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। नर्मल डेलिभरीपछि २५ गते डिस्चार्ज भएर घर गएकी उनमा ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गरिएको थियो। उनलाई बिहीबार थप उपचारका लागि धुलिखेल ल्याइएको थियो। ती महिलाको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, पारामेडिकल, सुरक्षागार्डलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। धुलिखेल अस्पतालले आकस्मिक कक्ष सिल गरेको छ। अस्पताल वरपर आउजाउ गर्न पनि रोक लगाइएको छ।
ती महिलाको शव शनिबार राति काठमाडौंमा ल्याइएको थियो। त्यसलाई विद्युतीय शवदाह गृहमा सदगत गरिएको थियो । कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव जथाभावी सदगत गर्न नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। शवलाई कमभन्दा कम चलाउनुपर्छ। शवलाई ‘डिसइन्फेक्ट’ गर्न भने आवश्यक छैन। शव लिएर काठमाडौं आएका चालक र कर्मचारीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) प्रयोग गरेका थिए।